धर्म Archives - Page 14 of 14 - Suchana Daily
घरमा सधै सुखशान्ति प्रवेश गराउन यी ८ कुरामा सधैँ ध्यान दिनुहोस् ! जानी राखौ
घरमा सधै सुखशान्ति प्रवेश गराउन यी ८ कुरामा सधैँ ध्यान दिनुहोस् ! जानी राखौ बास्तु शास्त्रका अनुसार विभिन्न कारणले घरमा केहि न केहि नराम्रो भइरहेको हुन्छ । बास्तु नमिल्दा घर परिवारमा अशान्ति भइरहेको पाइन्छ ।यदि घरमा बास्तु मिल्ने हो भने त्यो घरमा अशान्ति र दुख कहिल्यै हुदैँन । बास्तुले घरमा सकारात्मक.....
के तपाईंलाई शनिको महादशाले सताईरहेको छ ? मिलेको काम पनि बिग्रन्छ ? त्यसोभए कुण्डलीमा शनिको दोष भएको हुनसक्छ। शनि बिध्न र बाधाको देब हुन्। यदि कुण्डलीमा शनि खराब छ भने जिवनमा समस्या पर्छ र सुख-शान्ति मिल्दैन। बन्न लागेका पनि सबै काम बिग्रन्छन् र कुनै पनि उपायले समाधान हुदैनन्। तर नडराउनुस किनकि गणेशजीसंग.....
किन लगाउँछन् भगवान शिवले बाघको छाला ? यस्तो छ कारण
भगवान शिव भन्ने वित्तिकै तपाईंलाई एउटा स्वरुपको याद हुन्छ । हातमा त्रिशुल लिएका, बाघको छाला बेरेका, शिरमा चन्द्रमा र गंगासहित नागको माला लगाएका । धर्मग्रन्थहरुमा भगवान शिवको जुन स्वरुपको बर्णन गरिएको छ त्यो निकै आश्चर्यजनक छ । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? शिवजीले बाघको छाला किन लगाए ? यो जंगलमा.....